Shiinaha YF-2001 Miisaska Kafee ee Sare-u-Qaadista ah ee Kaa Yaabi Doona Sida Ugu Wanaagsan ee Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiyeha | Yifan
Qolka fadhiga wuu dejiyaa
YF-2001 Miisaska Kafee ee Sare-Sare oo Aad Kaaga Yaabi Doonto Sida Ugu Fiican Ee Suurtagal ah
Run ahaan magaceeda, miiskeena qaxwaha ee qarniga qarniga loo waxyooday wuxuu ka muuqdaa dusha sare si uu u muujiyo booska keydinta ee qarsoon. Dhamaadka lakabka walnut-ka waxaa lagu dhejiyaa dusha caleen marmar ah oo loogu talagalay meel bannaan oo dheeri ah - oo ku habboon kaydinta buugaagta inta lagu jiro kulankaaga soo socda.
Miiska kafee ee keydinta sare kor u qaad wuxuu bixiyaa qaabab fara badan iyo keydinta booskaaga casriga ah. Isku darka xariifka ah ee walxaha waxay ku darsataa taabashada diirimaadka iyo sidoo kale qaabka jilicsan ee qurxinta qolkaaga oo ay ku jiraan hadhuudhka jilicsan ee jilicsan iyo dhalaalka dhalaalaya. Miiska oo dhan ayaa kor u qaadaya si uu u muujiyo aag ballaaran oo kayd ah oo ka hooseeya, oo ku habboon qarinta meelaha fog, xeebta, xitaa qalabka ciyaarta. Farqiga ufiican ee khadadka qalooca iyo toosan
waxaan taageernaa OEM cabirka
LIFT TOP DESIGN: Miiska dushiisa si fudud ayaa kor loogu qaadi karaa loona sii wadi karaa si loo abuuro dusha sare ee shaqada, farsamooyin tayo sare leh ayaa awood u siinaya miiska in kor loo qaado ama hoos loo dhigo dadaal la’aan iyo buuq la’aan; miiska kor u qaadista badan ee kala duwan, uma baahnid inaad horay ugu tiirsato si aad ugu adeegsato laptop-kaaga, wax ugu qoro ama ugu cuntid miiska adigoo sariirta ku nasanaya
KAYDKA BADBAADADA: Qaybta qarsoon ee ka hooseysa dusha sare waxaa loogu talagalay in lagu keydiyo alaabadaada inta badan la isticmaalo sida joornaalada, laptop-ka, chess, hago-hayeyaasha fog, kontoroolayaasha ciyaarta iyo wixii la mid ah, iyaga oo ka dhigaya kuwo anfac lahayn oo wasakh la'aan ah; shelf hoose ee furan wuxuu hanan karaa busteyaal, cunto fudud ama knick-knacks
MID AH & JOOJI: Miiskan kafeega ah waxaa laga sameeyay P2 tayo sare leh oo waafaqsan MDF iyo farsamo bir ah, qaab dhismeed adag oo xasiloon ma gariiri doono oo ma awoodo inuu qabto 68 kg / 150 lb wadar ahaan
JIGJIGA MINIMALIST: Miiskan casriga ah iyo kan casriga ahi waa qaab fudud oo midabkiisu yahay mid qurux badan, wuxuu si fiican ula jaan qaadi karaa qaabka qolkaaga iyo qurxinta; miis kafee ah oo wax ku ool ah oo qurux badan oo ku yaal meelo yaryar, ayaa si fiican uga shaqeeya qolka fadhiga iyo xafiiska
Kulan aan walwal lahayn: Wuxuu la yimaadaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah iyo buug tilmaameed tusaala ah oo kaa caawinaya inaad sameysid miiska korka sare ee qaxwada si dhakhso ah oo aan dhib lahayn.
Hore: YF-H-907 noocyo maqaar maqaar ah
Jadwalka Qaxwaha ee la hagaajin karo
Miiska Qaxwaha oo Lift-Top La-hagaajin Karo
Shaxda Qaxwaha Hawlaha Badan
Qolka 508, Waqooyiga Of Yanzhao Street, Degmada Zhengding, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha